GM ohuru ohuru na Le Meridien Kota Kinabalu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » GM ohuru ohuru na Le Meridien Kota Kinabalu
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • ndị mmadụ • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Le Méridien Kota Kinabalu kwuputara nhọpụta nke Maazị Kanit Sangmookda dị ka Onye isi njikwa ọhụrụ maka ọrụ niile na Malaysian ụlọ nkwari akụ gụnyere mmepe ngwaahịa, arụmọrụ ego, ntinye akara, na afọ ojuju ndị ọbịa.
Amụrụ na Thailand, Maazị Kanit nwere nzere nzere masta na International Business Management nke gụrụ Management na Economics na Mahadum Wollongong dị na Australia. Ọ na-ewetara ya ihe karịrị afọ iri na itoolu nke ahụmịhe, na-arụ ọrụ na-eduga ụlọ ọrụ gọọmentị mba niile gụnyere Marriott International, Minor Hotel Group na mbụ Starwood Hotels na Resorts. Mmasị mbụ ya nke ụlọ ọrụ ile ọbịa bụ dị ka Onye Ọrụ Nchekwa na JW Marriott Hotel Bangkok. Site na mmụta na mmepe onwe onye na-aga n'ihu, o gosipụtara onwe ya ịbụ onye maara nke ọma na onye ruru eru na nhọpụta ya dị ka Director of Revenue Management na Bangkok Marriott Resorts & Spa na Westin Kuala Lumpur, yana Onye isi mpaghara mpaghara nke Revenue Management maka Starwood Hotels. & Ebe ntụrụndụ - Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Maazị Kanit abụghị onye ọbịa na ụlọ ọrụ ile ọbịa na Sabah ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi njikwa nke isi okwu anọ site n'aka Sheraton Sandakan ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ. Tupu nhọpụta ya na Le Méridien Kota Kinabalu, Maazị Kanit bụ onye isi njikwa maka Le Méridien Jakarta ebe o butere ụzọ nrụzigharị nke ime ụlọ nkwari akụ ahụ na ebe ezumike ha yana mbugharị na Marriott International mgbe nnweta nke Starwood.
N'ịbụ onye nwere ọmịiko, na-ekwu okwu ma bụrụ onye dị mma, Maazị Kanit bụ onye okike okike nke kwenyere na ịga nke otu nzukọ sitere na otu ndị ọkachamara na ndị ọhụụ. Ọ na-eme ka ndị otu ya rụọ ọrụ nke ọma site na ịdu ha ka ha mezuo ikike ha niile na nke onwe ha.
E wezụga onyinye a raara nye ụlọ ọrụ dị n'ime, ndị otu ya na onye nwe ụlọ nkwari akụ ahụ, Maazị Kanit nwekwara mmasị na ijere ndị njem nleta na ile ọbịa ọbịa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịa ọ bụla ọ gosipụtara dịka o kwenyere na ịlaghachi obodo ma kwụọ ya ụgwọ maka ọgbọ ọzọ . Laa azụ na Thailand, ọ nọrọ na ngwụsị izu ya bụrụ onye nkuzi oge oge na Hotel Management Faculty of Assumption University. N'oge ọ nọ na Sandakan, ọ so na ndị otu ọsụ ụzọ Executive Committee of Sandakan Tourism Association (STAN) nke hibere na 2015. Mgbe n'otu oge ahụ, ọ nọchitere Sandakan hotels dị ka Kọmitii Executive na Malaysia Hotels Association (MAH) - Sabah / Isi nke Labuan. Mgbe ọ kwagara Jakarta, Indonesia; o sonyekwara na Jakarta Hotel Association dị ka Kọmitii Executive nke ọ na-ebute ụzọ na ngalaba Education na CSR ma na-eme ọtụtụ ọrụ maka nzukọ ahụ.
Dịka Onye isi njikwa ọhụrụ, Maazị Kanit na-atụ anya iweta echiche na atumatu ọhụrụ iji gbalite Le Méridien Kota Kinabalu dị ugbu a na ọkwa ọhụrụ. O kwuru, sị, "Site na anya dị iche iche na ahụmịhe m, ụfọdụ ihe dị mma mgbe a hụrụ ha site n'ọhụụ ọhụrụ.
Mgbe ọ bụghị na ala ụlọ nkwari akụ, Maazị Kanit bụ nwoke ezinụlọ na-enwe mmasị na egwu, egwuregwu na ahụ ike yana foto.